ဗေဒင် Archives - ReaderGonnaRead
တစ်ပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်း – ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့မှ သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့အထိ
ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့မှ သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့အထိ ….. ကံ ဉာဏ် ဝီရိယ သုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင် ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေသော် … ဆရာဇင်ယော်နီ …. Credit : မနောမယဂျာနယ်….. ဇူလိုငျလ ၃၁ ရကျနမှေ့ သွဂုတျလ ၈ ရကျနအေ့ထိ …..…
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် စနေသားသမီးတွေက လူ့ဘဝကို စရောက်ပြီ ဆိုကတည်းက စိတ်ကြီးတတ်ကြပါတယ်။ ဒေါသဖြစ်ပြီ ဆိုရင်လည်း အရာဝတ္ထု တစ်ခုခုနဲ့ ကိုယ့်အသားကို နာကျင်အောင် လုပ်တတ်တယ်။​ စ​နေ သားသမီး​ကို ချစ်သူတော်မယ် ဆိုရင်…. စနေသားသမီးတွေက လူ့ဘဝကို စရောက်ပြီ ဆိုကတည်းက စိတ်ကြီးတတ်ကြပါတယ်။ ဒေါသဖြစ်ပြီ ဆိုရင်လည်း…
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေကို ချစ်သူဖြစ်တဲ့ရွေးချယ်သင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း(၅)ချက်
အရာရာမှာ စိတ်ဝင်တစားရှိပြီး စူးစမ်းချင်စိတ်များတဲ့၊ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို အသေးစိတ်တွေးတောတတ်တဲ့၊ အကောင်းမြင်စိတ်ရှိပြီး ချက်ချင်းအကြံကောင်းတွေထွက်တတ်တဲ့ ဉာဏ်ကြီးရှင်လေးတွေဆိုတာ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရလာတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုရလာရင် ဘယ်လိုအသုံးချရမလဲ ကောင်းကောင်းသိတဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေကို ချစ်သူအဖြစ်ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ (၁) နားလည်ပေးတတ်တယ် ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေဟာ သူများဘက်ကိုကြည့်ပြီး ခံစားချက်တွေကို ကိုယ်ချင်းစာနားလည်ပေးတတ်ကြတဲ့သူလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ပတ်သက်လို့ အလွန်အကျွံသဝန်တိုတာမျိုး၊ ချုပ်ချယ်တာမျိုး၊ တစ်ဖက်ကိုမကြည့်ဘဲ…
၂၀၁၉ ဇူလိုင်လ (၂၄) ရက်မှ ၊ ဇူလိုင်လ (၃၁) ရက်အတွင်း ( ၇ ) ရက် သားသမီး ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် ယတြာပြုရန်…
mrminyan July 24, 2019
မိတ်ဆွေများ အားလုံးအတွက် ၂၀၁၉ ဇူလိုင်လ (၂၄) ရက်မှ ၊ ဇူလိုင်လ (၃၁) ရက်အတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန် (၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း အကျွန်ုပ်၏ ဣဌသဘောဆောင်သည့် ကောင်းသော ဟောချက်များ မှန်ကန်၍ ၊…
သင်နေ့နာမ်အရ သင့်ကို ကံကောင်းစေမယ့် ရတနာ…
တနင်္ဂနွေသားသမီးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေက သူများတွေနဲ့မတူပဲ ထူးခြားတဲ့ စရိုက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကြီးတယ် ၊ စိတ်ဆတ်တယ် မသိရင် မာနကြီးတဲ့ပုံပေါက်နေပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ ဝမ်းနည်းလွယ်ပြီး သနားတတ်တဲ့ သူလေးတွေပါ ။ သူတို့က ဒေါသကြီး ပေမယ့် နူးညံ့တဲ့ နှလုံးသားပိုင်ရှင်တွေပါ ။ တစ်ဖက်သားကို စာနာသနားတတ်တဲ့ နေရာမှာ…
ဘ၀တစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲမြင့််တက်လတ္တံ့သော ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ အတွက် ၁၃၈၁-ခုနှစ် တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း
“ဘ၀တစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲမြင့်တက်လတ္တံ့သော ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ အတွက် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊ တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း” …..ကောဇာ သက္ကရာဇ် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း (၁၃)ရက် (၁၇-၄-၂၀၁၉) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သည် နှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့ ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ အတွက် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊ တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်းဘ၀တစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲမြင့်တက်လတ္တံ့။ အတိတ်ကံကိုအကြောင်းပြုပြီးငွေအစုလိုက်အပုံလိုက်ရခြင်း၊ထီဆုကြီးပေါက်ခြင်း ၊ခြံ၊ကား၊ကျောက် ကောင်းသောဝင်ခြင်းတွင်ရှိလတ္တံ့။ အချစ်ရေးမေတ္တာရေးကံကောင်းခြင်း၊မျက်နှာပွင့် စန်းပွင့်ခြင်း၊ငွေကြေးဥစ္စာပစ္စည်းများ…
နေ့နံအလိုက် ကံဇာတာနိမ့်ပါးမှေးမှိန်တတ်သော အသက်အရွယ်များ
နေ့နံအလိုက် ကံဇာတာနိမ့်ပါးမှေးမှိန်တတ်သော အသက်အရွယ်များ… .မွေးနံအလိုက် အသက်အရွယ်အလိုက် ကံဇာတာနိမ့်ပါးတတ်ချိန်များ ( ကလေးသူငယ်များမှာတော့ ကျန်းမာရေး နှင့် ပညာရေး ) အားနည်း တတ်ချိန်များ ကို အလွယ်တကူ ကြည့်ရှု သိရှိနိုင်ပြီး ဆိုင်ရာ ယတြာပိုင်းလေးတွေကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်အောင် တင်ပြပေးလိုက် ပါတယ်။ မြန်မာ့ရိုးရာ သေသဝိဇ္ဇာပညာရပ်အရ…
ရာသီခွင်တွေအားလုံးထဲမှာမှ အပျင်းထူဆုံး ရာသီခွင် (၅) ခု
mrminyan July 21, 2019
လူတစ်ချို့ဟာ နားချိန်တောင်မရှိလောက်အောင် အလုပ်များလွန်းနေပေမယ့် တစ်ချို့ကျတော့ ဘာမှလုပ်စရာမရှိသလိုဘဲ အပျင်းကြီးနေတတ်ကြပြန်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ အပျင်းကြီးတာကလည်း သူ့ရဲ့ရာသီခွင်ကြောင့်ဖြစ်နေတတ်တယ်တဲ့။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ရာသီခွင်တွေအားလုံးထဲမှာမှ အပျင်းထူဆုံးရာသီခွင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရော ဒီရာသီခွင်ထဲပါနေပြီလားဆိုတာ ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်။ 1. Aries (March 20 – April 20) Aries လေးတွေက အပျင်းထူသူလေးတွေပါ။…
သင် ဘယ်လို အိမ်ထောင်ဖက် နဲ့ ပေါင်းဖက်ရမလဲ
mrminyan July 20, 2019
ကျွန်ုပ်ငယ်စဉ်က အဘိုးအဘွား များနှင့် အနေများခဲ့လေ၏။ညညများဆိုလျှင်အိမ်ရှေ့ ၌ ဖျာကြမ်းလေးခင်းကာ အဘိုးအဘွား များနှင့် အိမ်နီးချင်းလူကြီးများသည် ရေနွေးကြမ်းအိုး နှင့် လက်ဖက်သုပ်ပန်းကန်ကို ဝိုင်းလယ်တွင်ချ၍ ရောက်တတ်ရာရာ စကားများကို ပြောတတ်ကြလေ၏။ ကျွန်ုပ်တို့ ကလေး များသည် ရွှေစွန်ညို ဘာကိုလိုလို့ဝဲပါတယ်၊ ဆီမီးခွက်က ပြောင်းပြန်ပြောင်းပြန်၊ ရွှေတံခါးကြီးဖွင့်ပါဦး၊ ညောင်ပင်တစ္ဆေ…